Buyisela Inqubomgomo - uthandoofqueen
Ikhaya / Buyisela inqubomgomo
E-Loveofqueen, ukwaneliseka kwamakhasimende kuhlale kuqala kuqala.
Amathimba wethu Wokuqinisekisa Amakhono Nezikhwalithi Zokuziphatha azohlola izinto zakho ngaphambi kokuthunyelwa. Ikhwalithi yethu yomkhiqizo iqinisekisiwe. Noma kunjalo, udinga ukuhlola usayizi wakho ngokucophelela nangokuqondile ngaphambi kokuthenga. Sicela ubheke ngomusa amashadi wesayizi kukhasi lomkhiqizo.
Uma unelisekile ngezinto ozitholayo, singakwazi ukuhlela kalula ukushintshaniswa noma ukubuyiselwa imali yakho. Silapha ukusiza! Sicela ukhululeke ukuhambisa ithikithi uma unenkinga nge-oda yakho!
Usuku lwe-30 Buyisela iwaranti
Customers can contact us within 30 days of receiving the item. If you have received a defective or damaged item, the wrong size or the wrong product, please contact us immediately Xhumana nathi.
Yiya kithi Xhumana nathi page and describe the issue in detail, including the return reason, along with your order number and SKU product number. For defective, incorrect or not as described item, please send us a clear picture or video of the problem.
I-1. Umthwalo we-Loveofqueen:
Uma inkampani yethu inesibopho salolu daba, sizovumela ukubuyela esitolo sethu sokubuyiselwa imali noma ukushintshaniswa.
Uma ikhasimende liye lala usayizi olungalungile, umkhiqizo noma umane ufuna ukushintshanisa into, singavumela futhi ukubuyisa.
Kulesi simo, ikhasimende lizobe libhekene nemali yokuthutha kokubili (kuya futhi kusuka esitolo sethu) ukuze kube nokushintshaniswa. Uma ikhasimende likhetha ukubuyiselwa imali, sizobuyiselwa imali yentengo yangempela yomkhiqizo. Yonke kanye nanoma yiziphi izimali zokuthumela azikhokhelwa.
Amanothi engeziwe mayelana newaranti
Zonke izinzuzo kufanele kuqala zivunywe yiqembu lethu lezinkonzo zamakhasimende; uma kuvunyelwe, uzonikezwa ifomu le-RMA. Izinto ezibuyiselwe ngaphandle kwefomu le-RMA ngeke zamukelwe.
Zonke izinto ezibuyiselwe kumele zibe sesimweni esisha, esingasetshenzisiwe / esingavunyelwe, engahlanjululwa, ziza nawo wonke amathegi okuqala kanye nokupakisha kwawo kwangempela.
Uma ikhasimende licela ukubuyiselwa imali, sizobuyisela izindleko zomkhiqizo wangempela lapho sithola into ebuyisiwe. Zonke izimali zokuthumela ukubuyisela into, kanye nemali yokuqala yokuthumela, ayikhokhwa imali.
Asiwamukeli ukubuyiselwa kokusondeza, ukugibeleka, izinto zangasese nobuhle, noma izinto ezithengisiwe. ngaphandle kokuthi ikhasimende lithole into engalungile noma into ayiphutha.